San Htun's Diary: August 2012
သမီးစံက သတိတရ တဂ်လာတော့ ဒီပို့ စ်လေး ဖြစ်လာပါတယ်။ နွေလရဲ့ဘလော့ ပျောက်ဆုံးတော့မလို ဖြစ်ရာက ဒီပို့ စ်လေး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သမီးစံ၊ ကန်ဒီခိုင်တို့ ဆီက သတင်းရရှိပါတယ်။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကတော့..
၂၀၁၀ မေလရဲ့တခုသော နေ့တရက်မှာ စပြီး ဖြစ်တည်ပါတယ်။ တခုသော နေ့ တရက်လို့ဆိုရတဲ့ အကြောင်းက ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်ဆိုတာ အတိအကျ မမှတ်တော့လို့ ပါ။ မေလ ၁၆ရက်နေ့ မှာ ပထမဆုံးပို့ စ် တင်တာကို ဘလော့စပေါ့က မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ သေချာတာကတော့ မေ၁၆ ထက်စောပြီး ဘလော့ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဘယ်လိုတည်ဆောက်လည်းဆိုတော့ ဂူဂယ်မှာ How to make blogspot လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဘလော့တည်ဆောက်နည်း ရှင်းပြထားတဲ့ PDF တခုက တော်တော်ကောင်းတယ်။ အဲဒီအတိုင်း တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ စစချင်းဆိုတော့ အခက်အခဲတွေ ရှိတာပေါ့ ။ ဘလော့တွေဆီ သွားလည်ရင်း စီဘောက်၊ လာလည်သူတွေ၊ လာလည်တဲ့နေရာပြတာတွေ ထည့်ရမှန်း သိလာတယ်။ ဘယ်လိုထည့်ရမှန်း ဂူဂယ်ကနေ ရှာပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကြီးမားပါပေတယ်။ ဗဟုသုတတွေ ရှယ်ဖို့ မဟုတ်။ ကိုယ်ခရီးသွားခဲ့အကြောင်းတွေ မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီမို့ လို့ဘလော့နာမည်ကိုတောင် ဒိုင်ယာရီလို့ပေးခဲ့တာပါ။ တွေးချင်တာတွေး ရေးချင်တာရေးမှာမို့ လို့Profile မှာတောင် " တွေးချင်တာတွေး၍ ရေးချင်တာရေးသည်။ ဝေဖန်လေကန်နိုင်ပါသည်။"လို့ရေးထားသေးတယ်။ Profile ဖတ်ရတာနဲ့ တင် ပိတ်ကန်ချင်စရာ ကောင်းလှပါဘိ။
ဘလော့ဆိုတာကြီးကို ၂၀၀၉ ဖေဖေါ်ဝါရီလောက်မှာ အင်တန်းအတူတူဆင်းတဲ့ အေးပိုဆီက သိရတာပါ။ နေ့ လည်စာပြီးရင် သူက နိုင်းနိုင်စနေ၊ မမ ဘလော့တွေ ဖတ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက Kent Ridge Park ကနေ Mount Faber Park အထိ ပန်းခြံလေးခုကို ဖြတ်ကျော်ခရီးနှင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ ခြေလှမ်းပေါင်းငါးသောင်းဆိုတဲ့ပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီး အိအိနဲ့ ဖလမ်းဖလမ်းထလိုက်သေးတယ်။
မြန်မာစာလည်း မရိုက်တတ် Burglish နဲ့ ရိုက်ရတာဆိုတော့ ပို့ စ်တပုဒ်ရေးပြီးတိုင်း ပလန်လက်တယ်။ တကယ်ရေးဖြစ်တာက၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ စတိတ်ကို ရောက်လာတဲ့အချိန်။ မြန်မာဆိုလို့တယောက်တည်း စကားပြောဖေါ်မရှိ။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကို ရင်ဖွင့်သလို ဘလော့မှာ ရင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ ကျောင့်ဖွင့်ချိန်စောင့်ရင်း မြန်မာစာဘာသာပြန်ပေးရင် ဘာသာပြန်ခပေးမယ်ဆိုလို့မြန်မာစာရိုက်တတ်အောင် လေ့ကျင့်လိုက်တာ တပတ်တောင် မကြာဘူးဗျား။ ဒီတော့ ၂၀၁၁ တနှစ်လုံး ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီး မျက်စိနောက်အောင် ပို့ စ်တွေတင်နိုင်ခဲ့လေတယ်။
ဘလော့လေးအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ရည်မှန်းထားသလဲဆိုတော့ ရေးချင်တဲ့စိတ်လေးရယ်၊ ရေးချင်တဲ့အတွေးလေးရယ်၊ အချိန်ရယ် ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေလောင်းပေါင်းသင် စိုက်ပျိုးခဲ့ရတဲ့ သစ်ပင်လေးလို၊ ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက ကျွှေးမွှေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်လို ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ဘလော့လေးကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘေဘီလေး ဖြစ်သလို ဝမ်းနည်းအားငယ်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အထင်သေးတဲ့မျက်ဝန်းတွေကို ကြံ့ကြံခံ့နေချိန်တွေ၊ နောက်ထပ်ဆိုတာ မရှိတော့အောင် ကြိုးစားရင်း မောလျနေချိန်တွေ ကိုယ်နဲ့ အတူ မျှဝေခံစားပေးတယ်။ ဘလော့စာမျက်နှာတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့စာမျက်နှာတိုင်းပါပဲ။
မပျောက်ဆုံးဖူးဘူး။ ဘလော့က ဂျီမေးလ်အကောက်နဲ့ ဖွင့်ရတာဆိုတော့ ဂျီမေးလ်နဲ့ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ တလတခါလောက် Backup လုပ်ပေမဲ့ External HardDisk ထဲ မသိမ်းဖြစ်တာက အချိန်တိုင်း။
သေချာတာကတော့ Backup မလုပ်ထားမိလေခြင်းလို့နောင်တကြီးစွာ ရနေမှာ သေချာတယ်။ နောက်တခါ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရဘူးလို့ကြုံးဝါးရင်းနဲ့ ပေါ့။ Recover လုပ်လို့ ရမဲ့နည်းလမ်းရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်း
မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ဘလော့လေးတွေ ဘာအကြောင်းနဲ့ မှ ပျောက်ဆုံးမသွားစေချင်မိဘူး။
မတဂ်ရသေးဘူးလို့ထင်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကု တဂ်လိုက်ပါတယ်။ တဂ်ပြီးသား၊ ရေးပြီးသားဆိုရင်လည်း မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်သွားပါနော်။ မရေးရသေးဘူးဆိုရင်လည်း အားရင် ရေးပေးပါဦးနော်။
ဒီစာရင်းထဲ မပါလည်း ပို့ စ်လာဖတ်တဲ့ မတဂ်ရသေးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို တဂ်ပါတယ်နော်။
အခုလောလောဆယ် နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို အတူတူ နားဆင်သွားပါဦး။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်တဲ့ ဂျပန်သီချင်းကို ဂျပန်စကားပြော တလတက်ဖူးလို့အိုဟိုင်းရိုးဂိုဆိုင်းမတ်၊ ခွန်နိချိဝ၊ ခွန်ဘန်းဝ၊ အာရီဂါတို ဂိုဆိုင်းမတ်၊ ဂိုမန်းနဲ့ စိုက်၊ ဆာယိုနာရ၊ ဒိုးဆို၊ အိုဂျီးစံ၊ အိုကားစံ၊ အိုအိချိ သာသိတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် နားမလည်ဘဲ နားထောင်နေပါတယ်။ သီချင်းလေးထဲက နွေရာသီကတော့ ပူနွေးတဲ့ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ပါတီပွဲတွေနွှဲပြီး အားလပ်ရပ်ကို ကုန်ဆုံးစေပေမဲ့ အပြင်က နွေရာသီကတော့ ၈၅၊ ၉၅ ဖာရင်ဟိုက် ၃၀၊ ၃၅ စဲစီးရပ် အပူချိန်။ ဒီသီချင်းလေးနဲ့ကုန်ဆုံးတော့မဲ့ နွေရာသီကို နှုတ်ဆက်ပြီး သစ်ရွှက်တွေရောင်စုံခြယ်မဲ့ ဆောင်းဦးကို မျှော်နေမိတယ်။
တလောက ရေဒီယိုမှာ ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ Good Life လေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
ဒေါက်တာရန်နိုင်ရဲ့အသစ်သီချင်းထဲက သက်ထား၊
YouTube မှာ မတင်သေးလို့SoundCloud ကနေ နားဆင်ရအောင် ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်သော နေ့ ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၂။
enjoying the beauty of nature from this chair.
ညသန်းခေါင်ယံ ရုတ်တရတ် လန့် နိုးလာခဲ့သည်။ အိမ်မက်ဆိုးမက်သောကြောင့် မဟုတ် အသက်ရှုမဝသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြေအောက်ထပ်အလုံပိတ်အခန်းမို့ လို့လေတွေ ကုန်ခမ်းသွားတာလား။ နှာခေါင်းဝ လက်ကလေးတေ့တော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကြောင့် နွေးနေသော လေငွေ့ ငွေ့ လေးကို ခံစားမိသည်။ သို့ သော် ရင်ထဲအသက်ရှုမဝ မွန်းကြပ်နေသည်။ လေဝင်ပေါက်များ ပိတ်ထား၍သလား။ လေဝင်ပေါက်ကို သွားစစ်ကြည့်တော့ တဟူးဟူး လေတိုးဝင်နေသံကြားရုံမက အေးစိမ့်သွားသည်။ ပြတင်းပေါက်များ ပိတ်ထား၍သလား။ ပြတင်းပေါက်ကို သွားဖွင့်တော့ လေနုအေးလေးကို တိုးဝှေ့ သွားသည်။ ဒါဆို အဲဒီလေတွေ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။
အသည်းအသန်လိုအပ်နေသည်။ အသက်ရှုမဝလို့သေသွားရင်..။ တကယ်ကြောက်မိသွားသည်။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ မပီပြင်သေးဘူး။ ကိုယ်တွေ့ ချင်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားတွေ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တွေအရာတွေ..။ ဘုရားရေ...။
လေယာဉ်ပျံသံတွေ နားမခံနိုင်သည့်အဆုံး ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်သည်။ သေခြင်းတရားဆိုတာ ရှောင်လွဲလို့ မှ မရတဲ့အတူ ရင်ဆိုင်လိုက်မည်။ နွေးထွေးစေတဲ့ ဆေးတွေလိမ်း နွေးနွေးထွေးထွေးဝတ် အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားရင်း အိပ်ပျော်သွားသည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ အိပ်ရေးဝလို့လန်းဆန်းတက်ကြွနေသည်။ အခန်းထဲက လေသည် အရင်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အရင်အတိုင်းမဖြစ်သည်က ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်။
အလုပ်ဝင်ကာစ မသိနည်းပညာတဲ့ဝေါဟာရတွေ၊ မရင်းနှီးသေးတဲ့ သူတွေ၊ မကျွှမ်းဝင်သေးတဲ့ အလုပ်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကြိုးစားနေရချိန်။ ကိုယ့်ရှေ့ ကတယောက်ကို တလနဲ့ဖြုတ်ထားတယ်လို့ကြားသိတဲ့အချိန်။ နေရာသစ်၊ အလုပ်သစ်၊ လူသစ်ဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးတယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။
so called Lavendar...
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာအောင်စား၊ ကျန်းမာအောင်နေဖို့ လိုသလို စိတ်ကျန်းမာဖို့ လဲ လိုအပ်သည်။ ကဲ ဒါဆို စိတ်ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲ။ အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ကလည်း အရေးကြီးသည်။ ကိုယ်တွေရဲ့အချိန်တော်တော်များများသည် အလုပ်၌ ကုန်ဆုံးသည်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးသည်။ အလုပ်ပင်ပန်းလျှင် တွေးလိုက်ပါ အလုပ်သာ မရှိဘူးဆိုရင် တော်တော်ပျင်းဖို့ကောင်းနေမှာလို့ ။
အီလက်ထရောနစ်ခေတ်ကြီးမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည့်အချိန်က များလေသည်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ စိတ်ဖိစီးမှုများတယ် ထင်ပါ့။ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေ စိုက်ပျိုးတာ၊ စာအုပ်ဖတ်တာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ အားကစားလေ့ကျင့်တာ၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ပေးတာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ တရားထိုင်တာတွေက စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ကျစေပါတယ်။ နာနာ မနာနာ ပရိတ်တရားဖွင့်ထားခြင်း၊ ပရိတ်တရားဖွင့်ရင်း အိပ်ခြင်းသည် ကိုယ့်အတွက်တော့ လုံခြုံစိတ်ချမှုပေးသည်။
မလေး နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးလျှင် လမ်းလျှောက်သည်ကို အားကျ၍ ကိုယ်လည်း နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးချိန်နဲ့ရုံးဆင်းချိန် ရုံးကို တပတ်ပတ် လမ်းလျှောက်လေသည်။ ကိုယ်တို့ ရုံးနားမှာတော့ စမ်းချောင်းလေး မရှိ။ ဘဲမကြီးနောက် မလိုက်သည့် ဘဲကလေးတွေကို စိတ်ပူစရာ မလိုဘေ ..:P။ လာဗင်ဒါဟု ကိုယ်နာမည်ပေးထားတဲ့ အလေ့ကျပေါက်ပင်တွေ၊ နီနီရဲရဲပွင့်အာနေတဲ့ နှင်းဆီးပန်းတွေ၊ ဆီးသီးနဲ့တူတဲ့ အသီးတွေ၊ ဆောင်းဦးကို ကြိုလင့်နေတဲ့ မြက်ရိုင်းတွေနဲ့ ။ မျက်နှာ ကွန်ပျူတာမှ ခွာလိုက်သောအခါ လှပသော သြကာသလောကကြီးကို တွေ့ လိုက်ရလေသည်။
ကိုယ်တော့ အလုပ်မှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမရတဲ့ အခက်အခဲတွေကြုံရင် မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး လေဝင်လေထွက် မှတ်ရင်း စိတ်ကို ခဏအနားပေးလေ့ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းတွေမောင်းသည့်ကားကို စီးရသည့်အခါ လက်ကလေးကို လေတိုးဝှေ့ သွားသည်ကို နှစ်သက်သဘောကျသည်။ မှန်အလုံပိတ်ကာ လေအေးပေးစက်ဖွင့်ရသည်ကို မနှစ်သက်ဘဲ ကားမှန်အကုန်ချကာ မောင်းလျှင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းများက ကောင်းချီးသြဘာပေးကြလေသည်။ ဆံနွယ်တွေ လေမှာဝေ့ကာ ခပ်ဖွဖွလေး အပြေးလေ့ကျင့်ရသည်ကို နှစ်သက်သဘောကျသလို စက်ဘီးစီးရင်း လေနဲ့ အတူ ရွှက်လွှင့်ရသည်ကို နှစ်သက်သဘောကျသည် ။
sweet fragrance with bees...
humble grass..but beautiful in my eyes...
ကန်ရေပြင်မြေညီနား ရပ်ရင်း ညင်သာစွာ တိုက်ခတ်နေသော လေနုအေးကို မျက်စိလေးမှိတ်ကာ ခံစားရင်း သိမ်မွေ့ လွန်းသောအရာတခုကို ဖမ်းဆုပ်မိဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ဖူးသည်။ မျက်စိလေးမှိတ်ကာ အသက်ခပ်ပြင်းပြင်း ရှုပြီး လေနွေးနွေးလေး နှုတ်ဆက်ထွက်ခါသွားသည်ကို တခါတုန်းက ကိုယ်တကယ် ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးသည်။
သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂။
အောင်မြင်၍ မအောင်မြင်သော အနားသတ်မျဉ်း...
သော့ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် မှောင်မည်း၍ တိတ်ဆိတ်နေသော အခန်းလေးက ရတီ့ကို ကြိုဆိုနေသည်။ အေးစက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေနှင့် ရတီ ကျင့်သားရနှင့်နေသည်။ တခါတရံမှာတော့ ကလေးတွေနှင့် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မိသားစုဘဝကို လိုချင်မိသော စိတ်ကလေးမှာ အလုပ်တဖက်၊ ကျောင်းတဖက် ပင်ပန်းနွမ်းလျမူများကြား ကျပျောက်သွားခဲ့သည်။
ချစ်စရာကောင်းပြီး ထက်မြက်သော ရတီမှာ့ လက်တွဲဖော် မရှိသေးဘူးဟု ဆိုလိုက်လျှင် အားလုံးက အံ့အားသင့်ကြသည်။ ရတီ့ကို မြတ်နိုးရင်ခုန်သောသူများ ရှိသလို ရတီ မြတ်နိုးရင်ခုန်ဖူးသော သူများလည်း ရှိသည်။ ရိုးသားကြိုးစားပြီး သားသမီးအတွက် အရာရာပေးဆပ်နေသော ဖေဖေ၊ မေမေ၊ မောင်နှမတွေကို ချစ်သောရတီ့အမ ဝတီ၊ များများလေးဆိုးပြီး နည်းနည်းလေး ချစ်ဖို့ ကောင်းသည့် ရတီ့မောင်လေး နဒီတို့ နှင့် ရတီ့ဘဝလေးက အေးချမ်းလှသည်။
ညဏ်ရည်သာမာန်ပေမဲ့ ကြိုးစားသော ရတီသည် မကြိုးစားသော ကောင်လေးများ၊ မိဘပိုက်ဆံထိုင်ဖြုန်းနေသော သူဋ္ဌေး၏သားများ၊ ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းသော၊ ရည်းစားများသော ကောင်လေးများ၊ အွန်လိုင်းမှ ကျူတတ်သော ကောင်လေးများကို နည်းနည်းလေးမှ အထင်မကြီး။ အပျိုကြီးဖြစ်မဲ့ဇာတာဟု သူငယ်ချင်းများက မှတ်ချက်ပေးသည်။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရင် စဉ်းစားနော်လို့သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတိုင်း ရတီက ရည်းစားထားဖို့အချိန်မရှိဘူးဟု ဆိုတတ်သည်။
တကယ်လည်း ပါရဂူဘွဲ့ အတွက် ကျမ်းပြု၊ အလုပ်လုပ်သော ရတီ့အတွက် အချိန်ရှားပါးလှသည်။ သည်ကြားထဲ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် စကားပြောချိန် ပေးရသည်။ ရတီ့ဘဝထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတိုင်း လက်မြှောက်သွားကြလေသည်။ ရည်မှန်းချက်တခု အောင်မြင်ဖို့အချိန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ကြီးကြီးမားမား ပေးဆပ်ရသည်။ အလုပ်ထဲတွင် အောင်မြင်သလောက် အချစ်ရေးတွင်တော့ မအောင်မြင်။
ရတီ နှစ်သက်တဲ့ တောင်တက်၊ ခရီးထွက်၊ စာအုပ်၊ ဓာတ်ပုံပညာ၊ သစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်လေးများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပျော်မွေ့ နေခဲ့သည်။ အချစ်ဆိုတာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ နေရာ၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သူကို ချစ်မိသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းဖက်ရဖို့ ကတော့ ကံကြမ္မာ၊ အခွင့်အရေး၊ အချိန်အခါ တိုက်ဆိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ရတီ့ မေတ္တာပန်း ခူးဆွတ်နိုင်မဲ့သူကို သူငယ်ချင်းအားလုံးက စိတ်ဝင်တစား ရှိလှသည်။ ရတီတယောက်ကတော့ အချစ်အကြောင်း မေ့ထားတယ်လို့ခေါင်းလေးမော့ကာ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်နေဆဲ...
လိုချင်တာကိုသိ၍ ရအောင်ယူတတ်သော အနားသတ်မျဉ်း...
အကိုတွေ မောင်တွေကြား ကြီးပြင်းခဲ့သည့် မီးငယ်အတွက် ကိုသက်သည်သာ ကမ္ဘာတခုဖြစ်ခဲ့တာ မီးငယ် နိုင်ငံခြား ကျောင်းသွားမတက်မှီ အထိ။ မီးငယ်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆက်ပေးလို့ကိုနိုင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးငယ်တို့ ထက် စီနီယာကျတဲ့ ကိုနိုင်က စာတွေရှင်းပြ၊ အခက်အခဲတွေ ကူညီရင်း သံယောဇဉ်တွယ်လာခဲ့သည်။ ကိုသက်က မီးငယ်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးပေမဲ့ ထမင်းရည်သောက်ကာ တဲအိုပျက်မှာ နေဖို့မီးငယ် သတ္တိမရှိဘူးလို့ဆိုလျှင် မီးငယ်ကို ဝေဖန်ကြမလား။ ဝေဖန်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို အားတင်းရင်ဆိုင်ရင်း ကိုသက်နဲ့၈ နှစ်ကြာ သံယောဇဉ်ကို ဖြတ်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသည်။ မိဘအသိုင်းအဝန်းတောင့်တဲ့ ကိုနိုင်သည် မီးငယ်ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လေသည်။ မီးငယ် သစ္စာမရှိဘူးဟု ဆိုကြလျှင် မီးငယ်နေရာ့မှာဆိုလျှင် သူတို့ လည်း မီးငယ်အတိုင်းပဲ ရွေးခြယ်ပါလိမ့်မည်။
တည်ငြိမ်ဦးဆောင်နိုင်သည့် ကိုနိုင့်လို ခင်ပွန်ကောင်း၊ ချစ်စရာကောင်းသည့် သားလေး၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့ မီးငယ်ဘဝက အေးချမ်းသာယာလှသည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက စာသင်ဂိုက်ဖြစ်သော မီးငယ် မီးဖိုချောင် ဝင်ခဲလှသည်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့မှ အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့နပန်းလုံးရလေတော့သည်။ နဂိုက ကျော့မော့ခဲ့သလောက် အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့မှ ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း အခြယ်အသကင်းတဲ့ မီးငယ်ကို တွေ့ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သနားကြလို့ ။ နင်တို့ယောက်ျားပဲယူ ကလေးမယူနဲ့ လို့မီးငယ်က ဟစ်ကြွေးဆဲ...
ကြွေက တဦးတည်းသော သမီး။ သူများမောင်နှမတွေမြင်တိုင်း အားကျမိသည်။ အိမ်ထောင်ပြုလို့ကလေးမွေးရင်တော့ဖြင့် ဘယ်တော့မှ တဦးတည်းသော ကလေးမမွေးဘူးလို့ကြုံးဝါးထားသည်။ ကြွေ့ ထက်အသက်ကြီးတဲ့ အထက်မန်နေဂျာနဲ့ကြိုက်တော့ အားလုံးက သဘောမတူဘူးလေ။ အချစ်ဆိုတာလည်း ထူးဆန်းတယ်။ ကိုလေးထက် ချောတဲ့သူ၊ ချမ်းသာသူတွေ တပုံကြီးကြားထဲမှာမှ ကိုလေးကိုပဲ ချစ်မိတာ။ ကြွေ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကိုလေးက နားလည်ပေးသလို ကိုလေး စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်း ကြွေ နားလည်ခဲ့တယ်။
မိဘအသိုင်းအဝန်း နှစ်ဖက်စလုံးက မတောင့်သူတွေဖို့ စလုံးရေ စရသည်။ ကိုလေး နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ကြွေလိုက်ခဲ့သည်။ လက်ထဲစုမိဆောင်းမိ ရှိအောင် နှစ်ပေါက်အောင် စုခဲ့ကြရသည်။ ဦးလေးအိမ်မှာ အဒေါ့်မျက်နှာကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ ကြွေ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလေးနဲ့နေချင်ခဲ့တာပါ။ နေစရိတ်ကြီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံမို့အိမ်ငှားတွေ တင်ရတိုင်း အိမ်သူကြီးဖြစ်သူက ခေါင်းရှုပ်ရစမြဲ။ ဟိုဟာကို ဟိုမှာ မထားပြန်ဘူး၊ အသီးအရွက်တွေ မကြည့်မိတာနဲ့လွှင့်ပစ်ရတော့မယ်၊ လျှော်မဲ့အင်္ကျီတွေကို လျှော်မဲ့တောင်းထည့်ပါဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မထည့်ဘူးနဲ့အရင်ကထက် ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် ဖြစ်လာရသည်။
သမီးလေး ဇူရီမွေးတော့ ကြွေ့ ဘဝ အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိလာခဲ့သည်။ အရာအားလုံးက သမီးလေးအတွက်။ သမီးလေးအတွက် အားမာန်တွေ ရှိလာသည်။ သမီးလေး ဂုဏ်ယူရတဲ့ မေမေဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသည်။ ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတော့မှ မိဘမေတ္တာကို ပိုနားလည်လာတော့သည်။ အရင်တုန်းကတော့ သားသမီးသုံးယောက်လောက် လိုချင်ပေမဲ့ ဒီခေတ်ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ကလေးတယောက် ကျွှေးမွှေးဖို့ ၊ ပညာသင်ပေးဖို့ တောင် အတော့်ကို မလွှယ်။ ရတီ့ကို တွေ့ တိုင်း အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးယူဖို့နားချရသည်။
နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ ယူခဲ့ကြတဲ့ ကြွေနဲ့မီးငယ် သင်ယူခဲ့ကြသည့်ပညာနှင့် အသက်မွေးပြီး လစာကောင်းမွန်တာကို အားကျမိသည်။ သြော်... ကိုယ့်မှာ သူတို့ လို အခွင့်အရေး မရှိခဲ့။ ဘွဲ့ ယူခဲ့သည့် ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမပြုရသည့် ဘဝကို စိတ်တိုင်းမကျဆုံး။ အခြေအနေပေးရင် သူတို့ လို ကျောင်းတက်မယ်လို့ကြုံးဝါးဆဲ..
ပြည့်စုံ၍ မပြည့်စုံသော အနားသတ်မျဉ်း...
အမြဲတမ်း ပြုံးနေကာ အေးချမ်းပြီး ချစ်စရာကောင်းသည့် ပြုံး။ ပြုံးဘဝက အားကျစရာ။ ပြုံးနဲ့ပြုံးခင်ပွန်းက တက္ကသိုလ်မှာ အတူတူကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းနေဖက်တွေ။ ကိုတိုးက နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာ မဟာဘွဲ့ ယူခဲ့ပြီး ခုတော့ ရန်ကုန်က သင်တန်းကျောင်းမှာ စာသင်သည်။ တဦးတည်းသောသားဖြစ်သည်မို့နည်းနည်းလေး အတ္တကြီးတာကလွဲရင် ပြုံးကို ချစ်လည်းချစ် ဂရုစိုက်ကြင်နာသည်။ ကောင်လေးတွေက ချစ်သူကောင်မလေးကို ဘာမဝတ်ရ၊ ညာမဝတ်ရလို့ချုပ်ချယ်နေချိန်မှာ ကိုတိုးကတော့ ပြုံးကို အလန်းဖြစ်အောင် ဆင်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ပြောကြတယ်။ ပြုံးတယောက် အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ပိုဟော့ပိုလှလာတယ်ဆိုပဲ။
ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်က တိုက်အိမ်လေးမှာ ယောက္ခမတွေနဲ့အတူနေသည်။ မချက်မပြုတ်တတ်ပေမဲ့ အိမ်တော်ထိန်းရှိတော့ အဆင်ပြေလေသည်။ ပြုံးကတော့ ယောက္ခမကြီးခိုင်းတဲ့ နေရာတွေသွား၊ ပိုက်ဆံသိမ်း၊ စာရင်းလုပ်ပေးရုံ၊ ကြီးကြပ်ပေးရုံလောက်ပဲ အလုပ်ရှိတာပါ။ အလုပ်အကိုင် မရှိတော့ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ။ ယောက္ခမကြီး သုံးဖို့ စွဲဖို့ပေးတဲ့ငွေလောက်ပဲ ဝင်ငွေရှိတယ်။ ဒီတော့လည်း အိမ်ကို အမြဲမထောက်နိုင်ဘူးပေါ့။
ပြုံးတို့ မိဘတွေက သိပ်အဆင်ပြေလှကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေ ကျောင်းစရိတ်တွေ ရှိတယ်။ ပြုံးအလုပ်လုပ်တုန်းကဆိုရင် အသုံးစရိတ်နှုတ်ပြီး ပိုသမျှ မေမေ့ပေးရတာ သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာပဲ။ ရုံးပိတ်ရက် ပြန်ပြီဆိုရင် ဖေဖေ၊ မေမေ၊ မောင်နှမတွေအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပြီး ပြန်ရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာ။ ခုတော့ အရင်လို မေမေ့အိမ် မပြန်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုတိုး အလုပ်အားမှကိုး။ ယောက္ခမကြီးနဲ့ကိုတိုးကတော့ သိတတ်ပါတယ်။ အိမ်ကို ကြုံရင်ကြုံသလို လက်ဆောင်တွေ လူကြုံပါးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ယောက်ျားဆီမှာ လက်ဖြန့်တောင်းရတာထက် ကိုယ့်ဝင်ငွေကို ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကိုင်သုံးရတာက ပိုကောင်းတာပေါ့နော့။ ပြုံးကတော့ ယောက်ျားယူပြီး ဇိမ်နဲ့ နှပ်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ့ ရင် အလုပ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းဆဲ...
မစွန့် စားရဲသော အနားသတ်မျဉ်း
သွယ်က တက္ကသိုလ်စာသင်နှစ်တွေတိုင်း ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ထူးချွှန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ မဟာဘွဲ့ ယူပြီးတော့ ကျောင်းမှာ ကျူတာ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ သွယ်တို့ တက္ကသိုလ်ကြီးက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲဆိုတာ သွယ်သိတယ်။ စာသင်တဲ့အလုပ်အပြင် ကျောင်းခေါ်ချိန်ကောက်၊ လုံခြုံရေး ဂိတ်ပေါက်စောင့်၊ ယူနီဖောင်းမဝတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လိုက်ဖမ်း၊ စာသင်ချိန်မှာ အခန်းထဲမှာ မရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အခန်းထဲမောင်းရတာ တကယ်ပင်ပန်းလှတယ်။ တက္ကသိုလ်စတက်တုန်းက ကျူတာဖြစ်ချင်စိတ်တွေ အတန်းကြီးလာလေ နည်းလာလေ ဟော..ကျောင်းလည်းပြီးရော လုံးဝကိုပျောက်သွားရော။
သွယ့် အမအဆက်အသွယ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တခုရဲ့ကွန်ပျူတာဌာနမှာ အလုပ်လေးတခုရတယ်။ လစာကတော့ လောက်ငှတယ်ဆိုရုံ ပိုလျှံတယ်လို့မရှိဘူး။ ဒါတောင် ဦးလေးအိမ်မှာ နေလို့အိမ်လခပေးစရာ မလိုလို့ ။ ကိုယ့်ဘာသာ အိမ်ငှားရမယ်ဆိုရတော့ ဟင်း..လစာနဲ့လောက်ငှမယ်မထင်။ သွယ့် ချစ်သူ အောင် က သွယ်နဲ့တက္ကသိုလ်အတူတူတက်ရင်း သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်လာခဲ့သူပါ။ အောင်က စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်ပြီး ရည်မွန်တယ်။ သွယ်တို့ ရည်ငံနေတာ နှစ်ဖက်မိဘတွေက သိကြတယ်။ အောင့်ဇာတိက သွယ်တို့ နဲ့တနယ်တည်း။ ရန်ကုန်မှာ အောင့်အမဝမ်းကွဲတွေအိမ်မှာ နေတာပါ။
နှစ်ယောက်သား လက်ထဲစုမိဆောင်းမိဆိုတာလည်း မရှိ ရသမျှကုန်ဆိုတော့ လက်ထပ်ဖို့ က အဝေးကြီး။ နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်း နယ်မှာဆိုရင် အိမ်ဘေးက မြေကွက်ကို အိမ်ဆောက်ပြီး လက်ဖွဲ့ ပေးနိုင်ပေမဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးနိုင်လောက်အောင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ သူများတွေ နိုင်ငံခြားထွက်ကြပေမဲ့ အောင်က နိုင်ငံခြားမှာ နေရတဲ့ဘဝကို နည်းနည်းလေးမှ မကြိုက်။
ရတီနဲ့မီးငယ်ကတော့ ကျောင်းလာတက်ဖို့ခေါ်ပေမဲ့ ကျောင်းလခ၊ ကျောင်းတက်နေချိန် လစဉ် ကုန်ကျငွေ၊ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာနေချိန် ကုန်ကျမဲ့ငွေတွေ။ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရရင် အဲဒီပိုက်ဆံတွေ ကျေတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒီလောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံကို ထောက်ပံ့ရအောင် မိဘကိုလည်း အပူမကပ်ချင်။ သွယ့်လောက် စာမတော်တဲ့ ရတီက သွယ့်ကို နှမြောလို့ မဆုံး။ တချို့ ကျတော့လည်း မိဘက ထောက်ပံ့နိုင်ပေမဲ့ သားသမီးက မလိုက်နိုင်။ တချို့ ကျတော့လည်း သားသမီးက တော်ပေမဲ့ မိဘက မထောက်ပံ့နိုင်။ ရတီ၊ မီးငယ်တို့ လို မိဘကလည်း ထောက်ပံ့နိုင်၊ သားသမီးကလည်း ကြိုးစားမှ အောင်မြင်တာပါ။ ဒီခေတ်ကြီးကလည်း ပညာဆိုတာ ပိုက်ဆံနဲ့ မှ သင်နိုင်တာ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် ပညာမတတ်ဘူးလေ။
သီတင်းကျွှတ်တိုင်း ဘယ်တော့စားရမလဲလို့မေးလာတိုင်း ဟန်လုပ်ပြူံးလေးနဲ့လာမယ်ကြာမယ်လို့ပြောရတိုင်း ရင်ထဲနာကျင်ရတယ်။ မိဘကလည်း သဘောတူ၊ ကိုယ်ကလည်း ချစ်ပေမဲ့ လိုနေတာက ပိုက်ဆံ။ ယောက္ခမတွေက မင်္ဂလာဆောင်ပေး၊ လက်ဖွဲ့ တဲ့ တိုက်မှာ နေ၊ သွားချင်တာ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနေရတဲ့ပြုံးဘဝလေးကို အားကျမိတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် ယောက်ျားလေးတွေက ပိုလှလာတတ်တယ်။ မိန်းမ လျှော်ဖွတ်ပေးတဲ့ ကော့ပျံနေတဲ့ အင်္ကျီဝတ်၊ စားချိန်အိပ်ချိန်မှန်လို့မိန်းမဖြစ်သူက ဂရုစိုက်လို့ လေ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် မိန်းမတွေကတော့ အရွယ်ကျတယ်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ အလုပ်တွေနဲ့ပတ်ချာလည်ရိုက်နေလို့ ။ ပြုံးကတော့ ခြားနားစွာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့မှ ပိုလှလာလေရဲ့ ။ သွယ့်ရဲ့ဒသနက အချစ်ထက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေ ဘဝမှာ ရှိတယ်။
လှိုင်ကတော့ စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်ပြီး ချောမောလှပသူလေးပါ။ စာသင်ဂိုက်ဆရာမမို့ လို့စိတ်ရှည်သည်းခံတယ်။ လှိုင့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်သူ ဝိုင်းဝိုင်းလည်ပေမဲ့ အသည်းလည်း ကွဲဖူးတာလည်းမဟုတ်၊ စိတ်ဝင်စားသလိုလို ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ ရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် တယောက်မှ မရှိခဲ့။ ဖေဖေ့လုပ်ငန်းတွေကို တာဝန်ခွဲယူရသလို ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့ မေမေ့ရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလည်း ဝင်ပါရတယ်။ ညီမငယ်ကြိုင်ရဲ့အချစ်ရေးပြသနာတွေလည်း ကူဖြေရှင်းရသေးတယ်။ အရွယ်တော်တဆိတ်ဟိုင်းလို့ရွေးချယ်ရမဲ့သူက နည်းလာ၊ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်လာလို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းလို ရင်လည်း တဒိတ်ဒိတ်မခုန်တော့။ ခုချိန်မှာ ချစ်ခွင့်ပန်လာရင်တော့ ဦးနှောက်ပဲ ရွေးတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရည်းစားလက်မဲ့ဆိုလို့ရတီနဲ့လှိုင် နှစ်ယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ မီးငယ်ကတော့ တွေ့ တိုင်း နင်တို့ နှစ်ကောင် ဘာလုပ်နေတာလဲ။ အသက်က ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး ရည်းစားမြန်မြန်ရှာလို့အချွှန်နဲ့ မရင် နှစ်ယောက်သား တလေသံတည်း ထွက်တယ်။ အံမယ် ငါတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးနော် ရတီလည်း ကျန်သေးတယ်လို့လှိုင်ကဆိုရင် ရတီကလည်း အားကျမခံ ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော် လှိုင်လည်း ကျန်သေးတယ်လို့ဆိုတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး အဆင်မပြေတာတွေ မြင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုရမှာလည်း ကြောက်မိတယ်။ ဒီအတိုင်းလေး အေးအေးချမ်းချမ်းနေလာရာက အပူတွေ မလိုချင်တော့ဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာကလည်း မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုပေါင်းစည်းတာဆိုတော့ အဖုအထစ်၊ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိတာပဲလေ။ ယောင်နောက်ဆံထုံပါလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ အိမ်မှာက လှိုင်က အခရာ မရှိမဖြစ်။ ဆံထုံးနောက် ယောင်ပါဦးမှ။ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဦးမှ။ လူမှာအမျိုး ကြက်မှာအရိုးဆိုသလို မိဘအသိုင်းအဝိုင်း၊ အဆင့်အတန်းကိုလည်း ကြည့်ရဦးမယ်။ စိတ်နေစိတ်ထားပြည့်ဝဖို့ လည်း လိုသေးတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတော့ စဉ်းစားလွန်းသွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့ ။ စဉ်းစားတာတွေ နည်းနည်းလျှော့မှပါပဲ။
မတူညီသော စိတ်ဓာတ်အတွေးအခေါ်၊ အမူအကျင့်၊ ခံယူချက်၊ မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ မတူညီသော အနားသတ်မျဉ်းခြောက်ခုကို သူငယ်ချင်းဆိုသောအရာဖြင့် ချိတ်ဆက်လိုက်သောအခါ ဆဋ္ဌဂံလေး ဖြစ်လာလေသည်။ များမြောင်လှသော ကိစ္စများဖြင့် ထိုအနားသတ်မျဉ်းလေးများ အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့ ဖြစ်၊ ဖုန်းမဆက်၊ တမြို့တည်းနေလို့မတွေ့ ဖြစ်ကြပေမဲ့ သူတို့ ၏ နှလုံးသားတထောင့်တနေရာတွင် ထိုဆဋ္ဌဂံလေးရှိနေခဲ့လေသည်။
သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂။
ဘော့စတွန်သွား တောလား - ၄
ဇူလှိုင် ၃ ၊ ၂၀၁၂။ အင်္ဂါနေ့ ။
မနေ့ က ဟားဗတ်နဲ့အမ်အိုင်တီတခွင် အလည်ကောင်းတဲ့ အကျိုးတွေ ဒီနေ့ တော့ ရေရေလည်လည် ခံနေရပါပြီ။ Duck Tour စီးချင်တာလို့ထပ်တောင်းဆိုတော့ ဘော့စတွန်မြို့တော်ကြီးဆီကို ၁ နာရီခွဲလောက် သွားရမှာ၊ ကိုယ်လက်တွေ ညောင်းညာနေလို့နီးနီးနားနား ပင်လယ်ကိုပဲ သွားရအောင်နော်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ ရုပ်ကလေး၊ လေသံပျော့လေးနဲ့ဆူနမ်က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်က သွားချင်ပေမဲ့ သူက လိုက်ပို့ ပေးမှ ရောက်မှာကိုး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟိုသွားဒီသွားချင်တဲ့ စိတ်သာရှိသာ ဖလက်ပြနေပြီ။
ပင်လယ်ဆီတောင် မရောက်လိုက်ပါဘူး။ နှစ်ကောင်သား တညီတညွှတ်တည်း ရေကန်ဘေးထိုင် ပန်လန်လက်ပြီး ပင်လယ်ကြီးကို ငေးကြတော့တာဗျား။ ဆူနမ်က ထုံးစံအတိုင်း သူ့ Gurung မျိုးနွယ်ကို မကြိုက်တဲ့အကြောင်း ဓာတ်ပြားဖွင့်ပါတော့တယ်။ သူတို့ မိသားစု အိန္ဒိယမှာ နေတုန်းက သူ့ မိဘတွေက ခေတ်မှီပွင့်လင်းပါတယ်။ နီပေါလည်း ပြန်ရောက်ရော သူတို့ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားရော။
နီပေါ၊ အိန္ဒိယမှာက ဇာတ်ခွဲခြားမှု ပြင်းထန်ပါတယ်။ မျိုးနွယ်စု မတူတဲ့သူတွေနဲ့ယူတယ်လို့ ကြားတိုင်း မျိုးနွယ်စုတူတာကို ယူဖို့ဆူနမ့်ဘာဘာ(အဖေ)က ဓာတ်ပြားဖွင့်လေတိုင်း သူ့ ကို မယုံဘူးဆိုပြီး ဆူနမ်က ဒေါသပုန်ထ။ ဆူနမ့်ဘာဘာက ဆူနမ့်ကို ယုံကြည်ပေမဲ့ တခုခုဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်နေတာပါ။ ဖေ၊ မေ၊ မကြီးကလည်း တကောင်ကြွက်ဖြစ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကို စိတ်အမြဲပူနေကြတာ။ စင်္ကာပူလောက် လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ စတိတ်မှာ သူငယ်ချင်း၊ မိဘဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်လူမျိုးမရှိတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ တယောက်တည်း ရပ်တည်ရတဲ့ ဘဝက ခက်ခဲပင်ပန်းတယ်။
ရေကန်စိမ်းလဲ့လဲ့မှာ ကူးခတ်နေတဲ့ စင်ရော်ငှက်ကလေးတွေရယ်၊ အဆုံးမရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြာပြာကြီးရယ်၊ ပင်လယ်နဲ့ရေကန်ကို ခြားနားပေးထားတဲ့ သစ်တောအုပ်လေးရယ်၊ ဆိုးတူကောင်းဖက် သူငယ်ချင်းတွေရယ်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့ နေ့ ရက်တွေ၊ မောပန်းလွန်းတဲ့ နေ့ ရက်တွေ၊ အထီးကျန်တဲ့ နေ့ ရက်တွေ၊ ဓားမတုံးစေဖို့သွေးနေရတဲ့ နေ့ ရက်တွေကို ခဏမေ့ထားလို့ ။
ဂင်္ဂါက မွေးနေ့ ကိတ်မုန့် မှာထားပြီးပြီလို့ရာမားပြောလို့နှပ်နေကြတာ ဂင်္ဂါကို မေးကြည့်တော့မှ မမှာပါဘူးတဲ့။ မွေးနေ့ ကိတ် မလှီးချင်တဲ့ ရာမားအကြံတွေကို ရာမားထက် လည်တဲ့ ဆူနမ် မိသွားပြီ။ မွေးနေ့ ကိတ် ဝင်ယူ၊ မွေးနေ့ ကိတ်ကို အလှဆင်ဖို့ဘောလုံးတွေ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေ ဝယ်။ အုပ်စုထဲမှာ အသေးဆုံး ရာမားတောင် ဘောလုံး၃လုံး ရအောင် မှုတ်နိုင်တယ်။ အဖြစ်မရှိတဲ့ စန်းထွန်းကတော့ တလုံးမှ မမှုတ်နှိုင်။ ကြိုးစားပန်းစား မှုတ်ပေမဲ့ လက်သီးဆုပ်သာသာ ဘောလုံးကို ကြည့်ပြီး သူတို့မှုတ်ပြီးသား ဘောလုံးတွေကို နံရံမှာ ချိတ်ခိုင်းတဲ့ တာဝန်ကြီး ပေးလိုက်တယ်။
ညနေစောင်းမှာ Independence Day Parade ကို သွားမော့ကြတယ်။ အိမ်ရှေ့ ခုံချပြီး လူအကုန်ထွက်ကာ အားပေးကြတာပါ။ ရဲကားသုံးစီးလောက်က တဝီဝီ၊ မီးသတ်ကားတွေ တပွမ်ပွမ် ဥသြဆွဲပြီး ရှေ့ ဆုံးက ချီတက်ပါတယ်။ နောက်မှာ သစ်တောဌာနက ကား၊ စစ်တွင်းခေတ်က ကား၊ ယူနီဖောင်းဝတ်တွေ ချီတက်တာကို လက်ခုပ်သံတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ကားတွေပေါ်ကလည်း သကြားလုံးတွေ၊ ဆွဲကြိုးတွေ၊ တီရှပ်တွေ၊ ကူပွန်တွေ ကြဲပါတယ်။ တို့ များ အလှုပွဲတွေမှာ သကြားလုံးတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ ကြဲသလိုပေါ့။
ဒီလောက်လှတဲ့ မွေးနေ့ ကိတ်ကိုတော့ တခြားဘယ်မှာမှ မြင်ဖူးမယ် မထင်။ မိုက်တီး.. အဲ ဆူနမ့်ရဲ့ရိုက်ချက်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ည ၉နာရီခွဲ မှာ မြို့ကြီးတွေသာမက မြို့သေးသေးလေးပါမကျန် တနိုင်ငံလုံး မီးရှုးမီးပန်း ဖောက်ပါတယ်။ မကြီးက အဲဒါ ငါတို့ ပေးထားတဲ့အခွန်တွေနဲ့မီးပန်းဖောက်နေတာလို့ ဆိုပေမဲ့လည်း အဲဒါကို သွားမော့ရတာပါပဲ။ ကားလမ်းတွေ ရှင်းသွားတဲ့ ည ၁၀ နာရီလောက်မှ ဘော့စတွန်ဆီ ရာမာ မွေးနေ့ ဝါးတီးဖို့ချီတက်ကြပါတယ်။ နှပ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကို မျက်လုံးအတင်းဖွင့်ခိုင်းပြီး ဘော့စတွန်ညအလှကို ရှုစားခိုင်းတယ်။ နီယွန်မီးရောင်တွေနဲ့ဘော့စတွန်မြို့က ပြိုးပျက်လှပနေတယ်။
North Station နားက Zakim ကြိုးတံတားကြီးက မီးစလိုက်တွေနဲ့လှပလို့ ။ ဟားဗတ်ကို သွားတုန်းက ရထားနဲ့ကားသွားနိုင်တဲ့ Longfellow တံတားကြီးကတော့ ခန့် ညားတယ်။
မြို့လယ်ကောင်မှာ စိတ်ညစ်ဖို့အကောင်းဆုံးက ကားပါကင်နေရာကို ရှာရတာရယ်၊ တလမ်းမောင်းလမ်းတွေမို့ဂျီပီအက်စ်က ညာကွေ့ လို့အော်ရင် ကွေ့ ရမဲ့နေရာ မရောက်ခင် ကွေ့ ထည့်လို က်လို့နာရီဝက်ဆိုရင် မိနစ်၅၀ လောက် မောင်းရတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ တွေ့ တဲ့ တနေရာလေးကို ဆူနမ် ပါကင်ထိုးတာ အဆင်မပြေလို့အင်ဒိုနီးရှားမလေး နေတီက နှစ်ကြိမ် ဝင်ထိုးရတယ်။ နောက်က ကားတွေက ဟွန်းမတီးတာဘဲ အံ့သြစရာ။ စတိတ်မှာက ဟွန်းသိပ်ကြိုက်ကြသကိုး။
ကျောင်းမှာတုန်းက မိုင်းဖန်နဲ့ကားမောင်းလေ့ကျင့်ရင်း လေပေးဖြောင့်ကြတာ မီးပွိုင့်မှာ မီးစိမ်းတာ မမြင်လိုက်လို့ဟွန်းတီးခံရတာ တနေ့ တည်း လေးကြိမ်။ ၃ လမ်းမောင်းဆိုရင် ညာဖက်အကျဆုံးက အနှေးလိမ်း၊ ဘယ်ဖက်အကျဆုံးက အမြန်လိမ်း။ တနာရီ ၆၅ မိုင် ဆိုရင် အလယ်လိမ်းက ၇၀၊ အမြန်လိမ်းက ၇၅၊ ၈၀။ အမြန်လိမ်းမှာနေပြီး နှေးနှေးမောင်းလို့ ကတော့ လာထား ဟွန်း။ ပွတ်ကာသီကာလေး ဖြတ်ကာ ရှေ့ မှာ ခပ်တည်တည် ဝင်ယူလိုက်ရင် လာထား ဟွန်း။ မိန်းလမ်းမက ကားတွေကို အကြာကြီး စောင့်ရင် လာထား ဟွန်း။ ဒီနေ့ တော့ ဟွန်းဒေးပဲလို့ပြောလိုက်မိတာ ဟွားနဲ့မိုင်းဖန် ဗီယက်နမ်နှစ်ကောင် မပြုံးဘဲ ဝါးလုံးကွဲ ရယ်လိုက်ကြတာ။ ဟွန်း ဆိုတာ ဗီယက်နမ်လို ကစ်စ် အနမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါသတဲ့။ ဒီနေ့ တော့ ဟွန်းဒေးဆိုတော့ အေး.. ကစ်စ်ဒေးပေါ့ဟာတဲ့။
စားသောက်ပြီး ပြန်တော့ မနက်၂နာရီ တီးနေပြီ။ စန်းထွန်းနဲ့ရာမားကတော့ ကားပေါ်မှာ စက်တော်ခေါ်နေပြီ။ မနက်ငါးနာရီမှာ ဆူနမ့်ကို နိုး၊ အိမ်တံခါးဖွင့်တော့ တက္ကစီက ရောက်နင့်နေပြီ။ အမေရိကန်တွေက အချိန်တိကျတယ်။ အချိန်နောက်ကျမှ ရောက်တာဟာ ချိန်းဆိုထားသူကို မလေးစားရာ ရောက်ပါတယ်တဲ့။ ရာမားနဲ့နေတီ့ကိုတောင် မနှုတ်ဆက်ခဲ့ရ။
လေဆိပ်ရောက်တော့ စက်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ချက်ကင်း ဝင်ရတယ်။ ဘော့စတွန်ကနေ ချီကာဂိုကို မနက် ၇ ၁၅ မှာ ထွက်ပါတယ်။ ချီကာဂိုရောက်တော့ ၉ နာရီ ခွဲနေပြီ။ လေယာဉ်က ၁၀ ၁၅ ထွက်မှာ။ အသည်းအသန် အူယားဖားရား ပြေးကာ ဘုတ်ဒင်းပတ်စ်ပေါ်က ဂိတ် စီ ၂၅ ကို သွားမေးတော့ စီ ၂၈ ပါတဲ့။ မမအိုင်အိုရာ ပြောတာ မှန်ပါတယ် ခင်ည။ ဘုတ်ဒင်းပတ်စ်နဲ့မစစ်နဲ့ ။ Screen ပေါ်ကဟာနဲ့ စစ်တဲ့။
၁၀ နာရီတောင် ထိုးတော့တယ်။ ဂိတ်မှာလည်း လူးဝစ်ဗီဆိုတာသာ ပေါ်နေပြီး တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ လေယာဉ်များ နောက်ကျနေတာလား။ ဘုတ်အကြီးကြီးမှာ သွားကြည့်တော့လည်း ၁၀ ၁၅ Confirmed။ တခြားဂိတ်တွေမှာ သွားကြည့်တော့လည်း လူးဝစ်ဗီဆိုလို့ဒီဘုတ်တခုတည်း။ ဘီလိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်။
ကယောက်ကယက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေ ငြိမ်အောင် မျက်မှန်လေးထုတ်ကာ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့လွတ်လပ်သောစိတ် စာအုပ်ထုတ်ဖတ်။ ဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့မှ လား..လား ..။ Central Time Zone မှာ ရှိတဲ့ ချီကာဂိုက Eastern Time Zone မှာ ရှိတဲ့ ဘော့စတွန်ထက် ၁ နာရီ နောက်ကျတာကို သတိမထားမိတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် နောက်ကျနေပြီဆိုပြီး ပျာယာခတ်နေတာ။ ဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ၉ ၁၅။ ဖုန်းက ဒေသစံတော်ချိန်ကိုလိုက်ပြီး အချိန်ပြောင်းပေးတာကို မသိတဲ့ စန်းထွန်း။ ဘုတ်ပေါ်က အချိန်ကို မျက်မှန်မတပ်လို့မမြင်တဲ့ စန်းထွန်း။ အဲဒီတော့မှ စိတ်အေးလက်အေး စာဖတ်နိုင်တော့တယ်။
၉ ၅၀ မှာ ဂိတ်ဖွင့်ပါပြီ။ ချီကာဂိုကနေ ၁ နာရီစီးပြီးတော့ လေယာဉ်မယ်လေးက
Happy 4th. Welcome to Louisville
လေဆိပ်ကထွက်လို့ကားပါကင်ဝင်းကြီးကို တွေ့ ပေမဲ့ ဘယ်လိုသွားရမှန်း မသိ။ ဂိတ်ကို သွားမေးတော့ ကားပါကင်ကို သွားချင်ရင် အပြာရောင် ပါကင်းလော့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စောင့်နေ။ ပါကင်းဝင်းက Shuttle က လာခေါ်လိမ့်မယ်တဲ့။ သိပ်မကြာပါဘူး ကားလေးရောက်လာတော့ ကားကို ဘာနေရာမှာ ပါကင်းထားလဲ။ ဂျီ ။ ဘာကားအမျိုးအစား ဘာအရောင်လဲ။ ဗောက်ဝါဂွန် ခဲရောင်။ ကားနားမှာ ရပ်ပေးပါတယ်။ စက္ကူဘူးခွံမှာ ပိုက်ဆံတွေတွေ့ တော့ ဒါတစ်ပ်ပေးထားတာနေမှာ။ ပေးဖို့ ရှာတော့ အနုတ်သေးမရှိတော့ ဆောရီးလိုက်ရတယ်။ အထွက်ကို အသေအချာ ညွှန်လိုက်သေးတယ်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တုန်းက အမေရိကန်တွေရဲ့အိမ်မက်ကား..
အိမ်ရှင်က ပြောတယ် အသားတွေ မည်းသွားတယ်တဲ့။ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ ဆူနမ်က ခွင့်၎ရက်ယူပြီး တနင်္ဂနွေမှ ပြန်လာမှာပါ။ စန်းထွန်းမရှိတဲ့ စနေနေ့ မှ သင်္ဘောသွားစီးကြမယ်တဲ့။ ကွန်ထရက်သမားလေး စန်းထွန်းခမျာ ခွင့်၂ရက်သာ ယူနိုင်ရှာလေသည်။ Delayမ သွားရာ Delay တတ်တဲ့ Delayမလေး ဆူနမ်တကောင် အပြန်ခရီးစဉ် Delay မဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းရလေသည်။
ရုံးတက်ပြီး တစ်ရက်အကြာ ကားရှေ့ မှန်မှာ စာတစောင် လာတင်ထားလေသည်။ ရည်းစားစာတော့ မဟုတ်။ သင့်ကား၏ ညာဖက်ထောင့်တွင် ရှိသော ကျွန်ုပ်ကားအရောင်နှင့် ကျွန်ုပ်ကားတွင် ရှိသော သင့်ကားအရောင်၊ သင့်ကား၏ အရာအတိုင်း ကျွန်ုပ်ကားတွင် ရှိသည်။ အဆိုပါ အချက်များကြောင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်ကားကို ဝင်ဆောင့်သွားသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း .... ။ ဂျရတ်ကို မေးတော့ ကန်တက်ကို တွေ့ ဖို့ လိုက်ပို့ ပေးတယ်။ စန်းထွန်း၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၂ နေရာမြောက်က ကန်တက်ရဲ့အလုပ်နေရာ။ တွေ့ တိုင်း ရယ်ပြနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ ရုံးနီးနားချင်း အမေရိကန်မလေး။
အဲဒီကား ဘာကားလဲလို့မှန်အောင် ဖြေနိုင်သူကို တဆင့်တိတိ ဆုချပါ့မယ် ခင်ညာ..
ကားတိုက်ပြီး ဘာမှအသိမပေးဘဲ ထွက်သွားတာ ပြစ်မှုမြောက်တယ်။ တိုက်မိလို့လူမရှိရင် ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရေးပြီး စာကပ်ထားခဲ့လို့ပီတာက ပြောတယ်။ အိမ်ရှင်က ၃၀၀ လောက်ဆိုရင် အာမခံ မသုံးနဲ့ ။ ကိုယ့်ဘာသာ ပေးလိုက်။ အာမခံသုံးရင် လစဉ်အာမခံကြေးတွေ တက်လိမ့်မယ်။ ဆူနမ့် အာမခံက ၆ လကို ၃၅၀။ ငါ အာမခံရှာတာ ၆၀၀ ကနေ ၉၀၀ ပဲတွေ့ တယ်။ ၃၅၀ ဆိုတာ မတွေ့ ဘူး ဆိုတော့ မိုင်းဖန်နဲ့ဆူနမ် နှစ်ကောင် Team Viewer သုံးပြီး စန်းထွန်း ကွန်ပြူတာကနေ ဝင်နှောက်ရှာဖွေပြီး စန်းထွန်းပြောတာ အမှန်မှန်း သိသွားကြတယ်။ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ လူးဝစ်ဗီက ဈေးကိုကြီးတာပါ။
ခန့် မှန်းတွက်ချက်ငွေ ၆၀၀ ကနေ ၁၃၀၀ ကြားကျမယ်ဆိုတော့ စန်းထွန်းတယောက် ဂစ်သွားရှာသည်။ တိုယိုတာ နောက်ဆုံးပေါ် ဈေးကြီးတဲ့ကားကိုမှ သွားတိုက်မိလေခြင်း။ အဲဒီကတည်းကစလို့နောင်များ ကားလန်းလန်းတွေ တွေ့ တိုင်း လိုချင်လိုက်တာလို့မတွေးဘဲ ဝှောင်ဝှောင်ရှေးရမယ့်ဟာလေးတွေလို့တွေးတယ်။ သူများတကာတွေ ရုံးနဲ့ နီးနိုင်သမျှ နီးအောင် ပါကင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ စန်းထွန်းတယောက်ကတော့ဖြင့် ဟိုးအဝေး ...အဝေးဆုံးမှာ တစီးတည်း ထီးထီးကြီး ပါကင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါကြောင်း။
ဘော့စတွန်တောလား ဤတွင် ပြီး၏။
သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၂။